Accueil > Gazetin'ny nosy > Governemanta vaovao : Iza indray ireo ekipa mbola tsy nihinana?
Governemanta vaovao : Iza indray ireo ekipa mbola tsy nihinana?
Mandeha dia mandeha ny resaka ankehitriny fa hisy ny fanovana ny mpikambana ao anatin’ny governemanta atsy ho atsy. Mety aoriana kelin’ny famoahana ny voka-pifidianana izay ho ben’ny tanàna eto Madagasikara izay hatao ao alohan’ny faha 15 janoary 2020 izao izany. Mety hatrany amin’ny fanovana ny praiminisitra Ntsay Christian mihitsy ity raharaha ity raha ny feo miely avy ao amin’ny mpikatroka IRD (Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina). Tsy mpikambana ihany fa ny feo avy ao an-dapa koa toa manamafy izany.
Noho izany dia efa mihetsiketsika mafy ireo mpanao politika akaikin’ny fitondram-panjakana sy ireo manampahaizana izay manodidina azy. Misy mihitsy aza no efa manao zimnastika izay tsy izy etsy sy eroa satria teho minisitra sy tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena.
Maro tokoa ny mpanohana an’ingahy Andry Nirina Rajoelina ka samy milaza azy ho dadany avokoa. Isan’ny tsy azo hamaivanina amin’izany ireo antsoina hoe “diaspora” izay milaza azy fa niara-namolavola ny IEM (Initiative pour l’émergence de Madagascar) tamin’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Ireo Malagasy mpila ravinahitra tany ivelan’i Madagasikara ka nanao botom-bazaha ary milaza azy fa avara-pianarana. Milaza fa tia tanindrazana ankehitriny rehefa reraka ny fanompoana vazaha ka izao miady mafy hitondra an’i Madagasikara izao indray.
Maro koa ireo Malagasy izay mpandraharaha nanampy an’ingahy Andry Nirina Rajoelina tamin’iny fifidianana iny ka mitady valibabena izy ireny ankehitriny. Miandry ny toerana izay mba hahazoany mihinana sy hanonerana ny lany tamin’ny fanohanana izy ireo noho izany.
Eo koa ireo mpiara-mitolona hatramin’izay tao anatin’ny Mapar sy ny Tgv izay antokon’ingahy Andry Nirina Rajoelina ka niara-nitolona teny an-kianja nanomboka tamin’ny 2009 izay nanonganana an’ingahy Ravalomanana Marc izay mpitondra voalaza tamin’izany fotoana izany fa mpanao didy jadona sy tsy refesi-mandidy. Mbola manantena ny hahazo toerana sy hitondra ny anjarabirikiny amin’ny fampandrosoana ny firenena izy ireo. Maro nefa no efa tsy hita intsony satria toa resin’ny fikambanana IRD izay ivondronana’ny mpomba ny fanjakan-dRajoelina ankehitriny.
Ny farany dia ireo fikambanana hafa rehetra milaza azy ho mpanohana ka mba miandry ny valin-tanana hataon’ingahy Rajoelina azy amin’izany. Isan’izany ireo mpamadika palitao sy ireo jiolahy pôlitika hatramin’izay.
Ny teny nataon’ny filoham-pirenena moa dia misy ny andrana sy fitsapana ho an’ireo minisitra sy ny filohan’ny governemanta ireo ao anatin’ny iray taona. Misy amin’ireo minisitra ireo no niasa tsy niato tao anatin’izay fotoana izay ka tokony hanome ny vokatra vitany tokoa. Rehefa tsy nahavita na tsy nahitana taratra fa hahavita ny andraikitra tokony nataony dia rariny sy hitsiny tokoa raha toa ka ho esorina fa mandany andro satria maika dia maika ny fanarenana ny firenena. Mbola misy koa nefa ireo vao volana vitsy no niasana amin’ny maha minisitra azy ka mbola sarotra ny handrefesana ny zava-bitany noho ny hafohin’ny fotoana fohy niasany.
Na izany na tsy izany nefa dia fantatra fa ady toerana sy ady pôlitika no tena mibahana tanteraka amin’ny olona ao anatin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Mifanenjika izay tsy izy ny olona manodidina an’ingahy Rajoelina. Mifanaratsy satria te hahazo toerana sy te ho minisitra sy sefosefo avokoa izy rehetra. Manao tati-bolana any amin’ny filoham-pirenena sy ireo izay hita fa miaraka mana-pakevitra aminy. Tena mifanaratsy sy manao fihetsika tsy voahevitra intsony ary mifana labaraka tanteraka.
Fantatra fa samy te hihinana sy hitondra indray izy mianakavy. Hadinon’izy ireo ny vahoaka sy ny firenena izay nifidy azy sy ny miandry ny fandrosoana nilokalokan’izy ireo.
Hatramin’izao fotoana izao aloha dia hita fa repotra ny ady an-trano ny mpomba an’ingahy Rajoelina . Mifampihatsara ivelan-tsihy ny ankamaroany ary tsy miraharaha raha tsy ny tombotsoan’ny tenany.
Tsy hanana fitoniana isika raha mbola hiady toerana toa izao ny mpitondra fanjakana satria tsy afaka handroso ny firenena fa ho lany andro amin’ny fanovana olona indray. Tao anatin’ny iray taona izay dia niaraha-nahita fa fanovana mpiasam-panjakana ambony sy mpitantana no tena nibahan-toeran teto. Ankehitriny ary dia mandeha dia mandeha indray ny feo ny amin’ny ho fanovana ny praiminisitra sy ny governemanta tarihiny. Rehefa miova ireo dia tsy maintsy miova indray ny ekipa hiara-miasa amin’izy ireo. Ao anatin’ny iray taona indray izany isika dia hampihinana ekipa vaovao hitondra firenena sy hanaovan’ny fanjakana valibabena. Hanao rapadango amin’ny volam-bahoaka sy ny fahefana homena azy.
Hiandry iray taona indray izany isika Malagasy amin’ny asa fampandrosoana raha vao manova governemanta eo ingahy Andry Nirina Rajoelina. Tsy maintsy ho lany andro amin’ny fanovana eo indray hatrany ambany.